Trump oo looga Digey inay Qudus u Tahay Muslimiinta Khad Cas
Dalal badan oo caalamka ah ayaa uga digey Trump inuu u raro safaaradiisa magaalada Qudus oo uu ku taamayo, waxaanay u soo jeediyeen inuu dib uga joogsado, haddii kala taasi xaalada uga sii dareyso. Madaxweynaha Turkiga ayaa ka digay in dalkiisu uu xidhiidhka u jari doono Israa’iil haddii Mareykanku uu u aqoonsado Qudus inay tahay caasimadda Israa’iil.
Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in tallaabadaasi ay Muslimiinta dunida uga dhigan tahay in Mareykanku uu khadka cas ka tallaabay.
Dalal badan ayaa ka dalbaday Donald Trump inuusan qaadin tallaabadaasi.
Waxaa jira warar sheegaya in madaxweyne Trump uu arrintaas ku dhawaaqi doono isbuucan, isaga oo fulinaya ballanqaadkii uu sameeyay markii uu ku jiray ololaha doorashada.
“Mr Trump! waxaad ogaataa in Qudus khad cas ay uga dhigan tahay Muslimiinta,” ayuu yidhi Erdogan oo khudbad ka jeediyay telefishinka.
Haddii Washington ay u aqoonsato Qudus inay tahay caasimadda Israa’iil, waxay noqoneysaa dalkii ugu horreeyay ee sidaa sameeyo tan iyo markii la alkumay xukuumadda Israa’iil 1948.
Israa’iil-na waxay Qudus u aragtaa in ay waligeed ahaan doonto caasimaddooda aanan la kala qaybin karin.
Midowga Yurub ayaa ka digay ‘cawaaqib daran iyo cadho ka timaado ra’yul caamka qeyba badan oo ka mid ah dunida.
Jaamacadda Carabta ayaa ku tilmaantay tallaabo khatar ah oo cawaaqib darran reebi karto.
Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa hogaamiyayaasha dunida ka dalbaday inay arrintan soo farageliyaan isagoo sheegay inay tallabadaasi ay “ burburin karto hanaanka nabadda.“